Ianareo no Antenimiera handany ny hevitra harosoko
Dia namaly ireo Boloky:”tena mahafaly , tompoko!”
Hisy omeko anareo an’izay anjara mofoko
Dia hampandrosoinareo izay mba hevitry ny Antokoko
Na ny lainga be ataoko na ny fitaka sy hosoko
Afeno ihany, koa anefa izato loto sy tsikoko
Ampiasaiko koa ‘nareo hanohana ny adim-pokoko
Dia namaly ireo Boloky:”Mahafaly izany tompoko!”
Izaho, anefa, mody miala f’ianareo no tena hatsofoko.
Dia azoko ny tokiko
Fa mahay ireo Bolokiko
Ho famaranako an’izany
Izaho mbola nanontany
Ary izaho raha sendra maty ka halevina ny nofoko?
Aza mba matokitoky
Izay fanaikin’ny boloky